Owona Mgangatho uPhakamileyo weeTriyisekile zaBantu abaDala zoThutho lweMpatho yeThreyisi yeTricycle Bike yaBadala uMvelisi kunye neFactory |Qiangsheng
Umgangatho ogqwesileyo waBantu abaDala iiTriyisekile zoThutho lweCargo Iibhayisekile ezinamaTritshi amathathu eziDala
UThutho lweMpahla kunye nabakhweli
Isithuthuthu soMbane sokuHamba kweTricycle yeTricycle 3 Ivili
ezimbini dia130mm iziqhoboshi igubu
dia 37mm ngaphambili ukothuka okufunxayo
Imigangatho emi-4 yasentlakohlaza
Ukwaziswa kweMveliso yoMdala oMdala oMdala oNcinci amaThathu amaNtshatsheli amaQela eTricycle yoMbane yokuHamba yoMbane evela eTshayina yoMbane weMpatho weTricycle
Ukusetyenziswa kosapho okanye abantu abadala basebenzisa isithuthuthu esifanelekileyo sokushukuma sombane iivili ezi-3 ngoku endaweni ye-pedal tricycle endala.Kulula ukulawula nokuqhuba.Abantu abaninzi abaselula bangathanda ukuhlawulela oku kubazali babo.Ngeli xesha, kukwakulungele ukuthabatha umntwana wosapho esikolweni ngokunjalo.
I-3 ye-Wheel Electric Bicycle Tricycle Auto Electric Tricycle Specification
Ibhetri enikwe amandla yi-BLDC motor kunye nokuqhuba okwahlukileyo
48v 500w BLDC injini
12 mos isilawuli iityhubhu
I-asi yangasemva eqinile enegubu lebrake
40km (konke kuxhomekeke kumthamo webhetri)
I-angle ye-20 degree
Windshield, uphahla kunye nomkhusane
Ubungakanani bevili elingaphambili
Iziqhoboshi zonyawo ngasemva amagubu amabini eziqhoboshi.
NW(kg ngaphandle kwebhetri) :
Inombolo yomkhweli (kubandakanywa nomqhubi):
48v 20ah ibhetri yeasidi ekhokelela. (ixabiso aliquki ibhetri)
Iziqwenga ezi-4 ze-12v 20ah zikhokelela kwiqela lebhetri yeasidi (ixabiso alibandakanyi ibhetri)
Iiseti ezingama-70/40"Isikhongozeli se-HQ
Auto Electric Tricycle Iinkcukacha Intshayelelo
Ubuhle kunye nomgangatho ophezulu we-speedometer ye-LCD
Isantya se-LCD sinenkangeleko entle kunye nendlela engaphezulu yokubonisa imeko yevili lombane le-3.Kucace kakhulu ukujonga kunye nokunikela ingqalelo.
Umsebenzi wokutshintsha umqheba wasekunene
Luphezulu, oluphakathi kunye nezantya ezisezantsi onokukhetha kuzo.
Iyakwazi ukuya phambili nangasemva.
Amaqhosha Kwi-Left Hanle Switch
Apha silungiselele isalathisi, ukukhanya kwemini kunye neqhosha lephondo.Umqhubi wombane we-3 Wheeler unokunika ulwazi oluninzi kubaqhubi abajikelezayo.
I-bumper ekumgangatho ophezulu ibonelela ngokhuseleko kwii-bumpings ezisecaleni.
Isitulo esingasemva esisongekayo kwibhokisi yenkampani.
Siye sayila isihlalo esisongekayo kwibhokisi yokuthwala.Umntwana okanye ilungu lentsapho linokuhlala .Enye imithwalo ingafakwa ngaphakathi kwibhokisi yokuthwala nayo.Iluncedo kakhulu kwaye ilungele ukusetyenziswa kosapho.
Umgangatho ophezulu wokutsala ukothuka, umqamelo wesitulo kunye ne-backrest.
Lo ngowona mzekelo mtsha siwuphuhliseyo ukuba siwusebenzise usapho.I-absorber esemgangathweni ophezulu, i-cushion yesihlalo kunye ne-backrest inokunciphisa ukuvakalelwa okungahambi kakuhle kwi-bumps xa uqhuba kwimeko yendlela enzima.
Ezinye iiModeli zeRickshaw yoMbane
Isilayishi seMpahla yoMbane iTricycle yoMbane yeCKD yokuPakisha kunye nokuhanjiswa
Ukupakisha kweCKD okanye ukuPakisha kwe-CBU.
Ngenxa yokuba irhafu yokungenisa kwisithuthi esidityanisiweyo kunye nezithuthi eziwisiweyo zahluke kakhulu kubathengi, sihlala sithumela ngaphandle ngokupakishwa ngokupheleleyo.Ngamanye amaxesha sithumela ii-rickshaws zombane nge-CBU yokupakisha ngokwesicelo somthengi.
Ngokuqhelekileyo iimveliso ezi-odolweyo ziya kuhanjiswa phakathi kweentsuku ze-15 zokusebenza.
INkampani ye-3 ye-Wheel Electric Bicycle Tricycle Intshayelelo-Qiangsheng
I-Qiangsheng Electric Tricycle Factory ngumvelisi oqeqeshiweyo wezithuthi zombane.Sinamava atyebileyo okuphuhlisa iimodeli ezintsha.Inkqubo yethu isikali ifikelele kwiiyunithi ezili-10,000 ngo-2012. I-Qiangsheng inezona zityalo ziphambili zemveliso, izixhobo zokuhlola, ivenkile yokuwelda eqhelekileyo, ivenkile yobunjineli, iworkshop yokupeyinta nge-electrophoretic, ivenkile yendibano.
Ngexesha elifanayo lokuphuhlisa imarike yasekhaya ngoku sithumela malunga neeyunithi ezingama-50,000 kwimarike yamazwe ngamazwe minyaka le ukususela ngo-2013.Umgangatho wezithuthi zethu zombane zibekwe ixabiso eliphezulu ngabathengi bamazwe ngamazwe. iitricycles zombane zokuthutha umkhweli okanye imithwalo.
Ukusika iLaser, ukugoba kweCNC, ukuwelda kwerobhothi kunye nepeyinti ye-electrophoretic iqinisekisa ubomi obude, iqinile, i-aut-corrosion kunye nenkangeleko entle yezithuthi zethu zombane.
I-Qiangsheng scooters yombane kunye neetricycle zombane zithunyelwe eIndiya, eNepal, eBangladesh, eChile, eMexico naseRashiya.Sisaqhubeka nokwandisa isabelo semalike yasekhaya kunye nokuphuhlisa iimodeli zezithuthi zombane ezintsha kwizicelo ezahlukeneyo zabathengi.
I-Mini E Inqwelo yeTricycle yeSiqinisekiso soMbane seCCC
Isatifikethi se-CCC se-tricycle yombane e Loader
Zonke iivili zethu ezi-3 zinesatifikethi seCCC kwaye zifumene isatifikethi se-ICAT kunye ne-ARAI evela phesheya.
Umthengisi weTricycle yeTricycle yoMbane kunye noMhambisi Nceda uqhagamshelane nathi
Isiqinisekiso kunye nenkonzo emva kwentengiso
Sinika abathengi bethu phesheya iinyanga ezi-6 zeemoto kunye nesiqinisekiso somlawuli.Ngeli xesha kuya kubakho i-1% ukuya kwi-2% kwiindawo zokunxiba ezilula kunye nomyalelo ngokunjalo.Ngeminyaka esi-7 yamava okuthumela ngaphandle sinamava atyebileyo okusebenzela abathengi ukuhlaziya imveliso kunye nokugcina.
Ngaphambili: I-48v 650w yeFashoni yoMbane yePedicab yeTricycle yaBantu abadala yoMbane yeMoto yokuSebenzisa okanye ukuSetyenziswa koSapho
Okulandelayo: Ubungakanani Box Box 1.55m*0.92m abakhubazekileyo 3 Wheel Scooter abadala Tricycles kubantu abadala 2
2021 fashion 72v scooter yombane 800w 2 ivili ...
Qiang Sheng Amavili amathathu ombane wesithuthuthu sombane...
2020 intengiso eshushu yombane iitricycle ezisecaleni...
2022 ngexabiso eliphantsi mahindra amathathu amavili ashushu s...
IYuropu yoYilo oluQhelekileyo lweRickshaw eHotyokisayo iThengisa ...
2020 ECO friendly 3 ivili ilori China ifektri ...
ITuk Tuk iyathengiswa iTukTuks ITuk yoMbane iTuk ITukTuk Izithuthi ezinamavili amathathu TukTuk Manufactures